मनोरंजन Archives - SAMACHAR SANJAL
वलिउडका कमेडी कपिल शर्माको शो बन्द भए पछी धेरै समय लगाएर उनि एक नया शो लिएर आएको छन र जसको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ ।शो ‘फ्यामिली टाईम विथ कपिल शर्मा’मा कपिल शर्मा कंगाल बनेका छन् भने घरमा काम गर्ने महिलासँग गफ गर्दै बसेका छन् । ट्रेलरमा कपिलले काम गर्ने महिलासँग पत्रिका माग्छन् तर पत्रिकावालाले उधारो नदिएको भन्छिन् । त्यसैगरी चिया बनाउनको लागि भन्छन् तर पसलेले उधारोमा चिनी नदिएको गुनासो काम गर्ने महिलाले सुनाउँछिन् । अर्कोतर्फ टिभी पनि पैसा सकिएको कारणले बन्द भएको हुन्छ । यसरी कंगाल बनेका कपिललाई भोलीबाट म…
स्टेजमा गायिका इन्दिरा जोशीले लगाईन आगो, दर्शक उनको प्रस्तुति देखेर यसरि रमाए (भिडियो सहित)
स्टेजमा गायिका इन्दिरा जोशीले लगाईन आगो, हेर्नुहोस दर्शक उनको प्रस्तुति देखेर यसरि रमाए (भिडियो) इन्दिरा जोशी नेपाली गायिका र मोडल हुन् । विजय भुषालद्वारा लिखित गीत रातो घाँघरा बाट उनले प्रसिद्धि पाएकी हुन् । उनले नेपाली चलचित्र लूटमा आइटम गीत उध्रेको चोली गाएकी छिन । उनले शकिरा जस्तै नृत्य गरेर नेपालमा नेपाली शकिराको उपनाम पाएकी छिन । इन्दिरा जोशीले डोरेमी संगीत एकेडेमीबाट संगीत सिकेकी हुन् । उनलाई उनको संगीत व्यवसायमा स्थापित गर्नमा नेपाली तारा कार्यक्रमको भूमिका रहेको छ। उनी नेपाली तारा कार्यक्रममा पाचौँ स्थानसम्म पुगेकी थिइन्। सन् २०१७ को नेपाल…
विश्वका झुक्क्याउने यी तस्बिरहरु तर बास्तबिकता अर्कै : तपाई पनि पक्कै झुक्किनुहुनेछ
तलका तश्विरहरु झट्ट हेर्दा एक अर्थ दिन्छ तर अलि घोरिएर हेर्दा बास्तबिकता अर्कै हुन्छ | भन्ने गरिन्छ कि फोटो अभिव्यक्तिको सबैभन्दा राम्रो माध्यम हो | तर कहिले काही फोटोले अर्थको अनर्थ पनि बोल्छ | एक पटक तलका फोटो हेर्नुस झट्ट हेर्दा तपाईलाई अचम्म लाग्छ तर पछी बास्तबिकता थाहा पाएर हासो पनि लाग्छ | पहिलो पटक हेर्दा फोटो देखेर लाग्छ कि ति युवतीले आफ्नो सरिरको माथिल्लो भागको अंग देखाएकी छिन तर बास्तबिकतामा फोटो खिच्नेको हात देखिएको हो।
कोरियामा मोजमस्तीका लागि यसरी फस्छन् नेपाली युवाहरु !
डडेल्धुराका रमेश महरा (नाम परिवर्तन) अविवाहित हुन कोरिया आएको चार बर्ष भयो तर उनी छुट्टीमा एकपटक पनि नेपाल गएका छैनन् । कोरियाको बुछन सिटीको एक प्लाष्टिक कम्पनिमा काम गर्ने उनले मासिक नेपाली दुईलाख चालीस हजार सरदर कमाउँछन तर उनले कोरिया आएर धेरै पैसा यौन मस्तीमा उडाए । महिनामा कम्तिमा दुई पटक यौन बजारमा उनको बाँस हुन्थ्यो उनी सोच्दथे रङ्गरमार्र्र्ईलो बिनाको के जीवन । दुर्भाग्य आज उनी दश महिनादेखि यौन रोग सिफलिसको औषधी सेवन गरिरहेका छन् । दाङ्ग घर बताउँने मुरारी कोरिया आएको दुई बर्र्ष पुरा भयो । उनी जेजु प्रान्तको…
अङ्ग प्रदर्शनमा ज्योति मगरलाई पनि पछार्ने सरस्वती लामाको रातारात हिट हुने गज्जबको आइडिया -प्रहरीलाई जोसिएका दर्शक सम्हाल्न हम्मेहम्मे (भिडियो)
पछिल्लो समय ‘उडि जाने हावाले’ गीत गाएर गायिका बनेकी सोलुखुम्बुकी सरस्वती लामाले नेपाली कलाकारितामा विभिन्न हर्कत मच्चाउँदै आएकी छिन् । रातारात हिट बन्न उनले नेपाली कला संस्कृतिलाई विर्सेर अंगप्रदर्शनको साहारा लिने गरेको पाइएको छ । त्यसो त उनी गीत लेख्नेदेखि संगीत भर्ने र भिडियो निर्देशन गर्ने दाबी गर्छिन् । उनीभित्र जेजस्तो खुबी भए पनि अर्धनग्न अवतारले नै बढी चिनिएकी छिन् । कला र क्षमताले कलाकार बनेका नेपाली कलाकारहरु सिमित छन् । जो स्थापित पनि छिन् । यस्ता कलाकार जो रातारात हिट हुन अनेक हर्कत अपाउँछन र रातारात विलाउनछन् कसैलाई अत्तोपत्तो…
पर्साकी सिमरन बनिन् यस वर्षको मिस तामाङ
काठमाडौँ- यस वर्षको मिस तामाङको उपाधि पर्साकी सिमरन स्याङ्बोले जितकी छिन् । नेपाल तामाङ कला–संस्कृति केन्द्र र एभरेष्ट फेसन होमले संयुक्त रुपमा शनिबार यहाँ आयोजना गरेको एघारौँ संस्करणको मिस तामाङको उपाधि पर्सा ठोरी गाउँपालिका–४ की सिमरनले जितेकी हुन् । उनले प्रतियोगितामा सहभागी २८ प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै उपाधि चुमेकी हुन् । सिमरनले प्रतियोगितामा सबैभन्दा बढी भोट प्राप्त गरेकी थिईन् । उपाधिसँगै उनले रु एक लाख पुरस्कार हात पारिन् । कार्यक्रममा सिमरनलाई सन् २०१७ की मिस तामाङ पिंकी घिसिङले ताज पहिर्‍याए । उनि एक वर्षसम्म सिभिल गु्रपको ब्राण्ड एमबास्डरसमेत भएकि छिन्। यस्तै, फस्ट…
मध्यराती दिपकराज गिरिले सलमान खानको बारेमा यस्तो लेखेपछी हाङामा
सलमान् खानको नेपाल टुर सुरक्षा को कारण रोकिएपछी सबैले आफ्नो अाफ्नो धारणा राख्दै आएका छन । केदार घिमिरेको भनाइ अली बिबादित बन्न पुग्यो दिपक र् मुन्द्रे को भनाइ आफ्नो देशमा आउने जो कसैलाई सम्मान गर्नुपर्ने र् कुनै रोक तोक गर्नु नहुने छ् हेर्नुहोस् दिपक को स्टाटस जस्ता को तस्तै हलमा हिन्दी फ़िल्म भन्दा नेपाली फिल्म कै बोलबाला छ हाम्रा केटाकेटीहरू आजकल हिन्दीगीत छोडेर नेपाली गीतमै नाच्छन्अरूलाइ रोकेर होइन प्रतिस्पर्धा गरेर हराउनुको मज्जा बेग्लै छ…… जितु नेपाल मुन्द्रे लेख्छन ; सलमान खॉनको कार्यक्रम रोकीयको बारे मेरो ब्यक्तीगत धारण……. हॉमीलाई फेसबुकमा लेख्न…
इजिप्टमा बेली डान्स प्रस्तुत गर्ने क्रममा भित्री वस्त्र नलगाएको अभियोगमा एक रूसी नृत्यांगना गिरफ्तार भएकी छिन् । ३१ वर्षीया क्याथेरिना एन्ड्रिभाले गिजाको नाइलस्थित एक नाइट क्लबमा नृत्य देखाउने क्रममा बेली ड्रेस मात्र लगाएर कामोत्तेजक नृत्य गरेकी थिइन् । उनको नृत्यलाई आकर्षक मानेर केही दर्शकले त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरेपछि प्रहरीको ध्यान आकृष्ट भएको थियो । उक्त नृत्य गर्दा भित्री पोसाक नलगाएको अभियोगमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेर ६ दिन थुनामा राख्यो । यसलाई आफ्नो जीवनकै सर्वाधिक नराम्रो दिन मानेकी क्याथेरिना अहिले जमानतमा रिहा भैसकेकी छिन् । त्यो पहिरनलाई बेली डान्सरहरू अश्लील…
917 SHARES Share Tweet Subscribe काठमाडौं–नेपाल आइडलका फस्ट रनरअप निशान भट्टराईको स्वरमा नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ। भट्टराईको स्वरमा ‘कोरेर मिठा भावहरु’ बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको हो। विपी वाग्लेको संगीत रहेको गीति भिडियोमा निरु त्रिपाठी र राजन खतिवडाको अभिनय छ। गीतका शब्द भने त्रिपाठीकै हुन्। नवीन भट्टले निर्देशन गरेको भिडियो मिसन इन्टरटेन्स्मेन्टले बजारमा ल्याएको हो।
एक अन्धविश्वासी किसानले आफ्नो बालीमा कसैको आँखा नलागोस् भन्दै पोर्नस्टारको पोस्टर राखेका छन् । अझ उनलाई मान्ने हो भने पोर्नस्टारको पोस्टर राखेकै कारण उनको बालीमा जादुसमेत हुँदै आइरहेको छ । चेन्चु रेड्डी नामका भारतीय किसानले बुख्याँचाका रूपमा पोर्नस्टार सन्नी लियोनको ठूलो पोस्टर आफ्नो खेतमा राखेका छन् । भारतको आन्ध्र प्रदेशका ४५ वर्षे रेड्डीले आफ्नो दस एकड खेतमा सन्नीको पोस्टर राखेका छन् । गाउँलेका राक्षसी आँखा पन्छाउन पूर्व पोर्नस्टार सन्नी लियोनको फोटो उपयुक्त हुने भन्दै रेड्डीले खेतमा यस्तो अभ्यास गरेको बताउँछन् । पोस्टरमा लेखिएको छ : ‘महासय मलाई देखेर नचिढिउँ ।’…